जब अध्याँरोमा जून देखियो... - Everest Dainik - News from Nepal
जब अध्याँरोमा जून देखियो…
नेपालगन्ज: रमजानको अन्तिम शुक्रबार । इदको पूर्वसन्ध्यामा नमाज पढ्न उनी घरमै आइपुगे । नेपालगन्ज–८ का ३० वर्षीय उनले खजुरास्थित कोरोना अस्पतालको आइसोलेसन कक्षमा नमाज पढेनन् । रोजा पनि बसेनन् । नेपालगन्ज–७ का ६० वर्षीय व्यक्तिसँगै उनका भान्जा मदरसामा पढ्न जान्थे ।
चिकित्सकले दुई सातासम्म घरभित्रै बस्न सल्लाह दिएका छन् । घरमा के गर्ने ? के नगर्ने सम्पूर्ण कुरा सम्झाएर पठाएका छन् । ‘सामाजिक दूरीमा ध्यान दिन भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘आफूलाई बचाउन आफैंले सावधानी अपनाउनुबाहेक विकल्प रहेनछ ।’ उनीहरू आउँदो आइतबार वा सोमबार इद मनाउँदै छन् । ‘सायद आइतबार नै इदको सम्भावना छ,’ हल्का मुस्कानमा उनले भने, ‘हामीले आजै चाँद देख्यौं ।’
याे पनि पढ्नुस इटली र फ्रान्समा कोरोना संक्रमण दर घट्दो, ब्राजिलमा भने बढ्दो
याे पनि पढ्नुस को हुन् आज थपिएका ७ कोरोना संक्रमित ?
याे पनि पढ्नुस सभामुख सापकोटाद्वारा ७३ स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध
कोरोना जितेर घर फर्किनेको खुसीको सीमा थिएन । त्यसअघि उपचारमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्कर्मीले पनि क्यान्सर अस्पतालबाट बिदाइ गर्दा खादा लगाइदिनुका साथै फूलका गुच्छा दिएका थिए । चिकित्सकको स्वागतले उनीहरूलाई भावुक बनायो । कोरोनासँगको युुद्धमा सफलता पाएका व्यक्तिलाई भेट्न आफन्त र परिवार पुगेका थिए । ‘अस्पतालमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले निकै राम्रो व्यवहार गर्नु भो ।
खानपिन र बस्न निकै राम्रो छ । हामीलाई जोगाउने सबैलाई धेरैधेरै धन्यवाद छ,’ घर फर्किरहेका एक युवकले भने, ‘घर फर्किएपछि केही दिन आराम गर्छु । कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउने काममा लाग्छु ।’
दोस्रोपटक पनि कोरोना जाँच गर्दा नेगेटिभ नतिजा आएपछि उनीहरूलाई शुक्रबार घर पठाइएको भेरी अस्पतालका मेडिकल विभाग प्रमुख डा. राजन पाण्डेले बताए । संक्रमितको उपचारमा अस्पताल प्रमुख थापा र पाण्डे खटिने गरेका छन् । घर फर्किनेमा नौ महिला र १२ पुरुष छन् । पहिलो संक्रमित ६० वर्षीय वृद्ध पनि निको भएर फर्किएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
ट्याग्स: Corona Nepal, काेराेना भाइरस, कोरोना अस्पताल, नेपालगन्ज, भेरी अस्पताल, रमजान